Wasiirrada difaaca Soomaaliya iyo Sudan oo ku shiray Khartuum – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Jeneraal Maxamed Sheekh Xasan Xaamud oo booqasho rasmi ah ku jooga dalka Sudan ayaa la kulmay dhiggiisa dalkaasi, Jeneraal Cabdiraxiin Maxamed Xuseen, waxeyna ka wada hadleen taageerada dhanka ciidammada ee ay dowladda Sudan u fidiso ciidammada Soomaaliya sidii loo sii ballaarin lahaa.
Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya, Maxamed Sheekh Cismaan, ayaa wasiirka Difaaca dalka Sudan war-bixin ka siiyey xaaladda Soomaaliya iyo horumarrada ka jira dhinacyada dhismaha ciidammada iyo dagaalladanka Al-Shabaab, dhinaca kale waxa uu uga mahadceliyey sida dowladda Sudan ay waqti walba u garab taagan tahay dalka iyo dadka Soomaaliyeed.
Wasiirrada Gaasaandhigga Soomaaliya iyo Sudan ayaa booqday xaruntna wasaaradda Difaaca dalka Sudan ee magaalada Khartoum, iyadoo lagu soo wareejiyey dhammaan qeybaha wasaaradda difaaca.
Wasiirka Gaashaandhigga dalka Sudan, Cabdixiin Maxamed Xuseen, ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan taakuleynta ay siiyaan ciidammada Qalabka Sida ee Soomaaliya ee dhinacyada qalabka iyo Tababarrada.
Dowladda Sudan ayaa ka mid ah dowlaha Soomaaliya ka caawinaya dhinaca ammaanka sida tababarrada ciidammada kala duwan iyo bixinta taakuleynt joogto ah, taasi oo sii xoojisay xiriirka u dhaxeeya labada dowladdood.
Sudan ayaa gacan siisa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, waxaana dhawaan halkaas tababar loogu qaaday dhalinyaro ka mid ah ciidamada amaanka Soomaaliya.